WAR CUSUB: Xulka Argentina oo Kaniiniyaal laga dharjinayo si ay caawa isaga celiyaan xulka Bolivia!!!! – Gool FM
WAR CUSUB: Xulka Argentina oo Kaniiniyaal laga dharjinayo si ay caawa isaga celiyaan xulka Bolivia!!!!
Byare March 28, 2017
(Bolivia) 28 Mar 2017. Tababaraha xulka Argentina Edgardo Bauza ayaa Kaniiniyaal siin doona ciyaartoydiisa si uu u caawiyo kulanka ay caawa ku wajahayaan xulka Bolivia isreeb reebka koobka adduunka.
Lionel Messi iyo xarfaantiisa ayaa caawa ku ciyaari doona magaalada leh dhulka ugu sarreeya caalamka ee heerka badda ka sarreeya 11,942ft (3,640m).
Xiddigaha Argentina ayaa qaadan doona dawooyin si ay ula tacaalaan madax xanuunka dhulka sare iyadoo kaniiniyaasha ay qaadanayaan uu ka mid yahay Viagra oo sare u qaadi doona bandhigooda.
Wiilasha xulka lagu naaneyso Albiceleste ayaa kulanka caawa ka hor qaadan doona dawooyin ay ka mid yihiin paracetamol, caffeine iyo Viagra si ay ula tacaalaan tijaabada adag ay wajahaayn, maadaama aysan 12-sanadood ku soo adkaan dhulka ay ku ciyaarayaan.
Ciyaartoyda ayaa sidoo kale imaan doona garoonka 2-saacadood uun ka hor inta aan kubbada la baasan si ay u yareeyaan jirada ama xanuunka laga qaado dhulalka sar sare.
Kaniiniga Viagra ee ah dawo sare u qaada ama caawisa bandhiga laacibka ayaan ku jirin liiska dawooyinka laga ganaaxay ciyaaraha.
“Dhibaatada dhulalka sar sare waxay timaadaa 20-ka daqiiqo ee ugu dambeysa kulanka,” Tababaraha xulka Argentina ayaa sidaa yiri.
“Waynu arki doonnaa sida aan ula tacaalno kulanka si jir ahaaneed.
“Marka aan meelo sare gaarno, ciyaartoyda waxaan siinnaa paracetamol si looga hor tago Madax xanuun.”.
Xulka Argentina inuu caawa ku ciyaarayo dhul sare oo aysan ku soo badin 12-sanadood waxaa u dheer in afar kulan laga ganaaxay kabtankooda Lionel Messi kaa oo aflagaadeeyay caawiyayaasha garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii ay 1-0 uga soo adkaadeen Chile isreeb reebka koobka adduunka.
Dekadda oo gacanta ku dhigtay hogaanka horyaalka kaddib markii ay dhulka ku jiiday Jeenyo isla markaana laga adkaaday Banaadir
Antonio Conte oo bartilmaameed xoogan ka dhiganaya Alexis Sanchez